कस्ता किसिमका गुलाफले के जनाउँछन ? - E Net Nepal
Home Love Special Valentine's Day कस्ता किसिमका गुलाफले के जनाउँछन ?
कस्ता किसिमका गुलाफले के जनाउँछन ?
E NET NEPAL 4:04 PM Love, Special, Valentine's Day,
कृपया गुलाफ दिंदा ध्यान पुर्याउनुहोला कि तपाई कसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र के भन्न गइरहनुभएको छ ! कुन गुलाफले कस्तो संदेश प्रवाह गर्छ ध्यान दिएर गुलाफसंगै ग्रिटिंग कार्ड अथवा हस्तलिखित पत्र भने नछुटाउनु होला ।
Published on enetnepal.com on 2013-02-12
By E NET NEPAL at 4:04 PM